Ụkpụrụ dabara na SQL Queries na Wildcards
Ụkpụrụ dabara na SQL Queries
Iji Oghere Wildcards maka Egwuregwu Na-adịghị Egwuregwu
Ụdị ihe atụ SQL na-enye gị ohere ịchọta ihe nhazi na data, ma ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ị na-achọ. Ụdị ụdị ajụjụ SQL a na-eji ihe odide odide ọhịa iji kwado ụkpụrụ, kama ịkọwa ya kpọmkwem. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji akara "C%" tụnyere eriri ọ bụla na-amalite site n'isi obodo.
Iji Onye nyocha dịka
Iji jiri okwu nchịkọta okwu na nza ajụjụ SQL, jiri ụdị ọrụ dị na ebe dị na WHERE, ma mechie ụkpụrụ ahụ n'ime akara ntụgharị ọnụ.
Jiri% Wildcard rụọ ọrụ dị mfe
Iji chọọ onye ọrụ ọ bụla na nchekwa data gị na aha ikpeazụ na-amalite site na akwụkwọ ozi C, jiri okwu Transact-SQL na-esonụ:
Họpụ * Site na ndị ọrụ EBE aha last_name Dị ka 'C%'
Mmetụta ihe ntinye site na iji okwu efu
Jiri okwu Nsiokwu na-agaghị eme ka ịhọrọ ihe ndekọ ndị na-adabaghị na ụkpụrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta a na-eweghachite ndekọ niile aha ya na-amaliteghị na C:
Họta * Site na ndị ọrụ ANYỊ aha ikpeazụ aha BỤGHỊ 'C%'
Ejiri Ụkpụrụ N'ebe ọ bụla Jiri% Wildcard ugboro abụọ
Jiri ihe abụọ nke % wildcard iji kwekọọ otu ụkpụrụ ọ bụla. Ihe atụ a na-eweghachi ihe ndekọ niile nwere C n'ebe ọ bụla na aha ikpeazụ:
Họta * Site na ndị ọrụ EBE aha ikpeazụ aha '% C%'
Ịchọta Ụdị Ebumnobi na Ọnọdụ Pụrụ Iche
Jiri okwun ugha iji weghachite data n'otu ebe. Ihe atụ a bụ naanị ma ọ bụrụ na C emee n'ọnọdụ nke atọ nke kọlụm aha ikpeazụ:
Họta * Site na ndị ọrụ OTU aha ikpeazụ aha '_ _C%'
Nkwupụta Voicecard akwadoro na SQL Transact
Enwere ọtụtụ okwu ekwenye ekwenye na Transact SQL kwadoro:
The % zero egwuregwu efu ma ọ bụ karịa ihe odide nke ụdị ọ bụla, ma nwere ike iji kọwaa wildcards ma n'ihu na mgbe ụkpụrụ. Ọ bụrụ na ị maara ụzọ DOS dabara na ya, ọ bụ otu nke * wildcard na syntax ahụ.
Ejiri anụ ọhịa ahụ bụ otu ụdị nke ụdị ọ bụla. Ọ bụ otu ihe ahụ ? Egwurugwu na DOS na-adaba.
Dee ndepụta nke ederede site na imechi ha na brackets square. Dịka ọmụmaatụ, aeiou [eriri] na-ekwekọ ụda ọ bụla.
Kọwaa ihe dị iche iche nke ihe odide site na ịchọta ebe dị na brackets square. Dịka ọmụmaatụ, akara ngosi [m] kwekọrọ akwụkwọ ọ bụla na akpa ọkara nke mkpụrụ okwu ahụ.
Negate dị iche iche nke ihe odide site na ịpịnye mkpụrụ akụkụ carat ozugbo n'ime oghere njiri oghere. Dịka ọmụmaatụ, [^ aeiou] na-agbaso ihe ọ bụla na-abụghị vowel mgbe [[m] kwekọrọ n'ụdị ọ bụla ọ bụghị na ọkara mbụ nke mkpụrụ okwu ahụ.
Ijikọta Wildcards maka Ụkpụrụ Mgbagwoju
Gwakọta ihe ndị a na usoro dị mgbagwoju anya ka ịmee ajụjụ dị elu karị. Dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịkwesịrị ịmepụta ndepụta nke ndị ọrụ gị nile nwere aha na-amalite site na mkpụrụedemede nke ọkara nke mkpụrụedemede mana ejighị ụdaume kwusi. Ị nwere ike iji ajụjụ ndị a:
CHINE * FROM staff EMERE last_name LIKE '[am]% [^ aeiou]'
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ndepụta nke ndị ọrụ niile na aha ikpeazụ ndị nwere kpọmkwem mkpụrụokwu anọ site na iji ihe anọ nke usoro:
Họta * Site na ndị ọrụ OTU aha ikpeazụ aha '____'
Dịka ị nwere ike ịkọwa, iji usoro SQL tụnyere arụmọrụ na-enye ndị ọrụ nchekwa data nwere ike ịgabiga ajụjụ gbara ederede dị mfe ma rụọ ọrụ nyocha dị elu.
Ịwụnye SQL Server 2014 Express Edition
Njikwa Nweta maka Ndị Ọrụ na Ọrụ na SQL
Kedu ihe bụ Transitive Dependency na nchekwa data
Ịmepụta tebụl na Microsoft SQL Server 2008
Definition of Data Database
Nchọpụta na Ọrụ ha na nchekwa data
Linksys EA4500 (N900) Okwuntughe Okwuntughe
Iji Ogwe USB Ikuku na Xbox 360
Esi wepu Virus Windows
Ịghọta Uru na Njikere nke Onye Nwegharị Ulo Ala na-arụ ọrụ nke 600 Mbps
Kedu ihe bụ Softphone?
6 Ụdị Ngwá Ọrụ Igwe ojii maka 2016-18
101 Free Alternative Online na Desktọpụ Desktọpụ
Top 6 Egwuregwu Free na Atụmatụ Ntugharị Download Movie
Kedu ihe bụ DIZ File?
Vtech Kidizoom igwefoto Review
Kedu ihe bụ BR5 File?
Okwu Mmalite nke BPL - Bọdwunye Dika Banyere Ike
Mụta Iṅomi Adreesị Weebụ nke Foto na Microsoft Edge
Egwuregwu Egwuregwu nke Xbox One nke kachasị mma kachasị mma ịzụta na 2018
Linux / Unix Iwu: expr
Njehie nke data? Kedu ihe dị n'ụwa?
Esi gbanwee Ntọala na Watch Apple gị
Sony VPL-HW40ES 3D SXRD Video Projector Profiled
CES 2014: Ọhụụ Audiophile ọhụrụ
DOOM Ndị aghụghọ PlayStation
Ihe ịmara tupu ịzụta DVR (Digital Video Recorder)
Onye ahịa Twitter Carbon maka gam akporo Review